Madaxwaynaha Iran oo madaxwayne ku xigeen u magcaabay saddex haween ah - BBC News Somali
Madaxwaynaha Iran oo madaxwayne ku xigeen u magcaabay saddex haween ah
Image caption Ms Ebtekar ayaa loo magcaabay madaxwayne ku xigeen
12 qof ayaa maamusha hay'adaha kala duwan ee ay ka kooban tahay madaxtooyadu.
Tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii Iran 1979-kii, waa markii ugu horraysay oo haween loo magcaabo xilal sidaas u sarreeya, marka laga reebo hal wasiir oo lagu magcaabi jiray Mardiyah taasi oo soo qabatay wasaaradda caafimaadka xukuumaddii Maxamed Axmedi Najad sanidihii 2009-2013-kii.
Xukuumad uu soo dhisay madaxwaynuhu oo aan wali la horgayn baarlamaanka ayaa waxaa tiro yar ku leh Muslimiinta Sunniga ah, kuwaasi oo 10% ka ah tirada guud ee dadka Iran.12 qof ayaa maamusha hay'adaha kala duwan ee ay ka kooban tahay madaxtooyadu.
Image caption Haweenka Iran ayaa ku jira baarlamaanka dalkaas
Masumeh Ebtekar ayaa loo magcaabay ku xigeenka madaxwaynaha ee arrimaha haweenka iyo qoyska, halka Maaouma Jnid loo magcaabay ku xigeenka madaxwaynaha ee arrimaha sharciga iyo Sheindecht Mulawardi oo loo magcaabay in ay madaxwaynaha kala taliso arrimaha xuquuqda rayidka.
Axsaabta isbedel doonka ah ee Iran ayaa ku doodaya in kala duwanaansho la'aanta golaha wasiirada ee cusub oo ay dumarku ku yaryihiin ay tilmaam u tahay in madaxwaynuhu uu cadaadis kala kulmay hay'adaha kala duwan ee diinta.
Xassan Ruuxaani ayaa loolankii doorashada madaxtinimo uga adkaaday ninkii la tartamayay ee Ibraahiim Ra'iisi.